Iindaba -Yintoni i-co-extrusion?
I-Co-extrusion, itekhnoloji yakutshanje kuluhlu lweenkuni, le teknoloji iphambili iyadityaniswa kumbindi, izinto zayo ezingaphezulu ezikhethiweyo zezona zinto zinika ibhodi nganye ukusebenza okungafaniyo kunye nokugqwesileyo. Iipropathi zokwambathisa ikepusi zenza ibhodi yokudibanisa izinzile kakhulu, Umphezulu awuyi kwanda kwaye wenze isivumelwano nezinye izinto ezakhiweyo, ngeli xesha ukufakwa kobushushu obuphantsi kuthetha ukuba iinyawo ezingenanto ziya kuyithanda, kunye nokuzinza kwayo okuphezulu kwe-UV umbala wayo wemvelo uya kuhlala iminyaka.
Ukudityaniswa kwe-co-extrusion okanye iibhodi ezinamakhonkco ziibhodi zesizukulwana sesibini se-WPC. Ziyilelwe ngesembozo esidityaniswe kumbindi webhodi ngexesha lokuvelisa. … Inkqubo yokudityaniswa kwe-extrusion ibandakanya ukusetyenziswa kwee-antioxidants, imibala kunye nee-inhibitors ze-UV zokwenza isiseko.
Izibonelelo zechungechunge lwe-Lihua co-extrusion series
ILihua ibhodi edityanisiweyo ifezekisa ukugqitywa kombala okungafaniyo kunye nokwenyani, ngokuthelekisa kuphela kwimithi yendalo, obu buchwephesha buhambele phambili kunye nobuchule buvumela ukudityaniswa kombala okumangalisayo, ukubonelela ngeyona bhodi idityanisiweyo.
Ngokusekwe kumava omzi mveliso kunye nolwazi, sikwazile ukwanelisa phantse zonke iimfuno ezahlukeneyo zabathengi ngokunikela ngokudibeneyo Co-extrusion wpc decking Uluhlu olunikiweyo lokuhombisa luxatyisiwe ngokugqitywa kwabo okugqwesileyo, amandla aphezulu kunye nezinye iimpawu ezizodwa.
Sinemibala eyahlukeneyo sinokukhetha, Sinokwenza ngokwezifiso imibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu ngokweemfuno zabathengi.Ngokunye unokukhetha iipatheni ezahlukeneyo ezibhalwe ngaphezulu.Iyona nto ibaluleke kakhulu, singenza imveliso ye-bicolor co-extrusion yeWPC.Lokhu kungakunika ishishini , wena kunye nabathengi bakho unokukhetha ngakumbi kumbala, iya kuba yindawo elungileyo yokuthengisa kuwe!
Imigca emine yokudibanisa i-co-extrusion yokwenza, sinokuqinisekisa ukuba ixesha lakho lokuhambisa.Ngokukunika ukhetho olungakumbi kuwe.Siza kubeka iimveliso ezigqityiweyo kwindawo eQhelekileyo, xa unyango lugqityiwe, siya kupakisha ezi bhodi njenge isigqibo.
Ukuba unomdla kule nto, ungandwendwela umzi-mveliso wethu. Siyakwamkela ngokufudumeleyo kumzi mveliso wethu.
WPC decking ngaphandle, WPC decking umgangatho, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC nokwadala, WPC decking edityanisiweyo, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC,